Maxkamadda Ciidamada oo Xukuntay Askari - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Maxkamadda Ciidamada oo Xukuntay Askari
May 6, 2019 admin701
Dable Axmed Maxamed Xuseen oo katirsan Ciidamada Amniga gaar ahaan Booliska ayaa siyaaba kala duwan dhac ugu geystay dad rayid ah oo uu u galay waddada xilliya kala duwan qeyba kamid ah degmada Kaaraan gaar ahaan Xaafadda Jamhuuriya.
Maarso Tobankeedii Sanadkan ayay Ciidamada amniga kasoo qabteen Xaafadda Jamhuuriya xilligaasi oo uu gacmaha kula jiray dhac uu u geysanayay qaar kamid ah bulshada ku dhaqan xaafadaasi.
Saddexda bishii tagtay ayay xafiiska xeer ilaalinta codsadeen in la horgeeyo Maxkamadda, lix cisha kadib ayay Maxkamadda ballamisay eedeysanaha maxkamadeyntiisa.
Xukunka Maxkamadda Darajada Koowaad waxaa ka furan Rafcaan.
Maxkamad ku taal Koofur Afrika oo 10 sano ku xukuntay haweeney xaday Ilmo